सकियो कोदो रोपाइँ- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
लमजुङ — जिल्लाका ग्रामीण भेगमा मुख्य बालीको रूपमा लिइने कोदोको यो सिजनको रोपाइँ सकिएको छ । मकै र धानपछि गाउँलेले लगाउने बालीमध्ये कोदो रोप्ने गर्छन् ।
लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका–११ सिन्दुरे, तुर्लुङकोटमा बारी जोतेर कोदो रोप्दै स्थानीय । तस्बिर : कान्तिपुर
क्व्होलासोंथर गाउँपालिका–४ भुजुङकी पूर्णकुमारी गुरुङले कोदो रोपाइँ सकिएर अब धान गोड्ने बेला भएको बताइन् । ‘कोदो रोपेर सकियो । अब धान गोड्ने बेला भयो । त्यसपछि कोदो गोडिन्छ,’ उनले भनिन् । मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–४, ताघ्रिङका बेंसबहादुर गुरुङले पनि कोदो रोपेर सकिएको बताए । गाउँघरमा अर्मपर्म गर्दै कोदो रोप्ने गरिएको छ ।
‘एकअर्कालाई सघाउने पर्मको चलन अझै चलेकाले खेती गर्न सजिलो छ,’ उनले भने, ‘मिलेर धान गोड्छौं, अनि कोदो गोड्ने बेला पनि एकअर्कालाई सघाउने हो ।’ किसानका अनुसार ग्रामीण भेगमा मकैबाली भित्र्याउनै लाग्दा मकै लगाएका बारीभित्रै कोदो रोप्ने गरिन्छ । मकै भित्र्याइसकेपछि नल तथा डाँठको व्यवस्थापन गरी कोदो रोप्ने चलन छ ।
सुन्दरबजार नगरपालिका ११, सिन्दुरे तुर्लुङकोटकी कमला दुराले बताइन् । तुलुङकोटमा मकै भाँचेपछि नल उखेली गोरु जोतेर कोदो रोप्ने गरिएको स्थानीय कमला दुराले बताइन् । ‘हामीले मकै भाँचेर गोरु जोती कोदो रोपाइँ गरिसक्यौं । अब बिस्तारै हुर्कन्छ र गोड्ने बेला हुन्छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार कोदोलाई पिठो बनाएर ढिँडो, रोटी बनाएर खान सकिन्छ । यस्तै ग्रामीण भेगमा मदिरा बनाउन पनि कोदो प्रयोग हुन्छ । उनका अनुसार गाउँले अधिकांशले कोदो रोप्छन् । पहिले मकै रोप्ने खेतमा पछि कोदो रोप्ने गरिएको उनले बताइन् ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कृष्णभद्र अधिकारीका अनुसार जिल्लाका पहाडी तथा ग्रामीण भेगमा बढी मात्रामा कोदो रोपाइँ हुन्छ । सिँचाइ हुने ठाउँमा धान र नहुने जग्गामा कोदो रोप्ने गरिन्छ । ‘हाम्रोमा कोदो २ तरिकाले रोपिन्छ । एउटा मकै उत्पादन हुने बेला मकैबारीभित्रै रोपिन्छ भने मकै भित्र्याइसकेपछि खनजोत गरेर कोदो रोप्ने गरिन्छ,’ उनले भने ।
माथिल्लो ग्रामीण भेगमा मकैबारी भित्रै कोदो रोप्ने र तल्लो ग्रामीण क्षेत्रमा मकैबाली भित्र्याएर नल उखेलेपछि कोदो रोप्ने गरेको कृषिका नायव प्राविधिक सहायक सुमन पण्डितले बताए । कृषिका अनुसार क्व्होलासोंथर, मस्र्याङ्दी, दूधपोखरी र दोर्दी गाउँपालिकाका धेरै गाउँमा कोदो रोपाइँ गरिएको छ । नगरपालिका क्षेत्रको ग्रामीण भेगबाहेक सहरबजारमा भने कोदो रोपाइँ प्राय: गरिएको छैन ।
लमजुङमा ४५ हजार ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिएकोमा कोदोमात्रै ७ हजार ९ सय १९ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोप्ने गरिएको छ । यसअघिका वर्षमा ६ हजार एकसय ६० मेट्रिकटन कोदो उत्पादन हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘कोदो उत्पादन बढेको पनि छैन, खासै घटेको पनि छैन । युवाशक्ति बिदेसिएपछि खेत बाँझो रहेकाले उत्पादन भने केही घट्दो छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:३५
काठमाडौँ — नेपालभर नै बढ्दै गइरहेको जेष्ठ नागरिकहरुको जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै वृद्ध अवस्थामा धेरैमा देखिने ओस्टियोपोरोसिस र हाडजोर्नीको विभिन्न समस्यालाई बेलामा नै पहिचान गरी उपचार गर्नका लागि काठमाडौंको धुम्बराईस्थित ह्याम्स अस्पतालले नि:शुल्क शिविरको आयोजना गरेको छ ।
अस्पतालले ५० वर्ष माथिका महिला तथा पुरुषका लागि भदौ ७ देखि ९ गतेसम्म अस्पतालमै संचालन गरेको उक्त शिविरमा ४०० भन्दा बढीले आफ्नो स्वास्थ्य परिक्षण गराएका थिए।
उक्त शिविर स्वास्थ्य परिक्षणमात्र नभइ सहभागीहरुलाई ओस्टियोपोरोसिस र हाडजोर्नी रोग र त्यसको रोकथामका उपाय बारे केही सामान्य ज्ञान पनि दिइएको थियो। त्यहाँ कार्यरत हाडजोर्नी रोगका विशेषज्ञ चिकित्सकहरु डा. भाष्करराज पन्त, डा. विज्ञान भण्डारी, डा. प्रशान्त अधिकारी, डा. सन्दीप भण्डारी र डा. रबिन्द्रबस्नेत (फिजियाेथेरापी) ले नै स्वास्थ्य परिक्षणमा सहभागीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै उनीहरुलाई वृद्ध अवस्थामा हुनसक्ने ओस्टियोपोरोसिसका साथै हाडजोर्नीका विभिन्न समस्या र त्यसको उपचार पद्दतीबारे जानकारी गराएका थिए।
अस्पतालमा कार्यरत हाडजोर्नी तथा मेरुदण्डरोग विशेषज्ञ डा. विज्ञान भण्डारीका अनुसार विशेष गरेर महिनावारी बन्द भएका महिला तथा वृद्धहरुमा बुढ्यौलीका कारण ओस्टियोपोरोसिस र विभिन्न प्रकारका हाडजोर्नीका समस्याहरु देखापर्छन्।
‘बुढेसकालमा धेरैमा देखिने समस्या भनेको ओस्टियोपोरोसिस हो,’ उनले भने, ‘यो महिलाहरुमा महिनावारी बन्द भएपछि इस्ट्रजेनको कमी कारण देखा पर्छ भने पुरुषहरुमा उमेर ढल्किँदै गएपछि देखिन्छ। यस्तै छारे रोग, दम र बाथका औषधीहरु लमो समयसम्म प्रयोग गर्नेहरुमा पनि यो समस्या देखिन सक्छ।’
उनका अनुसार त्यसैले स्वास्थ्य परिक्षण गराउन आएकाहरु सबैको नि:शुल्क ‘क्याकानियल डेन्सिटोमेट्री’ (हाड्डीको बलियोपन)को परिक्षण तथा परामर्श दिइएको थियो।उक्त अस्पतलमा हाडजोर्नीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण रोगहरुको उपचार पनि हुने उनले बताए।
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७५ ०९:२७